Taliyaha cusub ee Amisom oo soo gaaray Muqdisho (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Taliyaha cusub ee Amisom oo soo gaaray Muqdisho (Daawo Sawiro)
Waxaa Magaalada Muqdisho soo gaaray Taliyaha cusub ee ciidamada Midowga Afrika Amisom Jeneral Cismaan Nuur Subugle, kaasi oo xilkaan loo magacaabay Bishii June ee aynu soo dhaafnay.
Jeneral Cisman Nuur Subagle oo u dhashay dalka Jabuuti ayaa yimid Magaalada Muqdisho, wuxuuna durba kulan la qaatay Madaxa Howlgalka Midowga Afrika ee Somaliya.
Jeneral Subagle Taliyaha cusub ee Amisom ayaa kulanka uu la yeeshay Wakiilka Midowga Afrika ee Somaliya Danjire Francisco Caetano Madeira,wuxuu kala hadlay isbedelka cusub ee hogaanka Ciidanka isagoo sheegay in isbedelkan uu yimid waqti muhiim u ah howlgalka Amisom.
“Jeneraal ayaa yimid waqti aan doonayno in howlgalka Amisom dib u eegis lagu sameynayo sanadkan 2016 waan ku faraxsanahay kulanka aan la yeeshay iyo wadahadalkeena. Hadda fikradda howgalka waxay gashay xooga hirgelinteedana waxaa ay imaanaysaa xilli uu isaga taliye ka yaha.” Ayuu yiri danjire Madeira.
Jeneral Cismaan Nuur Subagle, oo u dhashay dalka Djibouti ayaa waxaa uu leeyahay khibrad shaqo oo howlgalka Amisom ah isagoo soo noqday madaxa Amisom ee qeybta difaaca intii u dhaxeysay 2012-2013-kii.
Dhinaca kale Jeneral Subagle ayaa ah nin yaqaan Afka Somaliga oo uu ku hadlo, taasi oo ka sii saacideysa dalka Howlgalka Amisom uu ka socdo oo ah Somaliya.
Amisom oo sheegtay inay baareyso dadka ciidamada Itoobiya ay ku laayeen Gobolka Baay
Midowga Afrika oo sheegay inay qalabeynayaan ciidamada Somalida ka hor inta aysan Somaliya ka bixin